Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao Mafana » Etazonia Vaovao Vaovao » Fomba entina miady amin'ny rivodoza Gobally
Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Vaovaom-panjakana • Vaovao • teknolojia • Tourism • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Tsiambaratelo momba ny dia • Travel Wire News • Etazonia Vaovao Vaovao • Vaovao isan-karazany
Niara-niasa tamin'ny University of Michigan hiady amin'ny Cyclones i NASA.
Ny tetikasa antsoina hoe CYGNSS dia misiônera mpisava lalana.
Ny US Space Agency NASA dia nanome fifanarahana tamin'ny University of Michigan ho an'ny Cyclone Global Navigation Satellite System (CYGNSS) ho an'ny asa fitoriana sy ny fanakatonana.
Miaraka amin'ny antokon-kintana microsatellites valo, ny rafitra dia afaka mijery matetika ny tadion-drivotra ary amin'ny fomba tsy ahafahan'ny satelita nentim-paharazana, mampitombo ny fahafahan'ny mpahay siansa mahatakatra sy maminavina ny rivodoza.
Ny sandan'ny fifanekena dia manodidina ny 39 tapitrisa $. Ny Ivotoerana miasa siantifika CYGNSS dia miorina ao amin'ny University of Michigan.
Nandritra ny am-polony taona maro, NASA dia nitana andraikitra lehibe tamin'ny fampiasana ireo satelita mpandinika ny Tany mba hanangonana ireo angona takiana mba hanomezana sakafo ireo maodely milaza faminaniana momba ny toetr'andro. CYGNSS dia manohy ny asa, amin'ny fampiasana teknika fanamoriana lavitra antsoina hoe "famafazana famantarana GPS" hijerena amin'ny oram-batravatra mba hanombatombanana ny tanjaky ny rivo-doza any anaty atin'ny rivodoza anatiny.
"Ny CYGNSS dia iraka mpisava lalana izay nanome anay fahitana vaovao momba ny fientanam-po amin'ny rivodoza tropikaly mihombo haingana", hoy i Karen St. Germain, talen'ny NASA's Science Science Division. "CYGNSS dia fitaovana matanjaka ihany koa amin'ny fisavana ny tondra-drano amin'ny fitrandrahana fako microplastic an-tanety sy an-dranomasina - izany no karazana soatoavina ampiana tianay ho hita, ary manamboatra làlana ho an'ny siansa misimisy ahazo tombony lehibe eo amin'ny fiaraha-monina."
Ny fandrefesana avy amin'ny CYGNSS dia ilaina amin'ny fikarohana amin'ny fampandrosoana algorithm, famakafakana mba hanampiana ny ezaka modely ho avy ary ny fandalinana ny rafitra eto an-tany.
Ny fandidiana bebe kokoa dia hahafahan'ny fikarohana vaovao mijery ny fiovaovan'ny toetr'andro maharitra ary hampitombo ny haben'ny tranga tratra izay afaka manampy amin'ny famolavolana modely sy vinavina. Ny satelita CYGNSS dia manohy mandray refy 24/7 amin'ny ranomasina, na an'izao tontolo izao na amin'ny cyclones tropikaly, izay azo ampiasaina handinihana ny fizotran'ny toetr'andro sy hanatsarana ny vinavinan'ny toetr'andro. Eny an-tanety, ny zanabolana dia mandrefy refesin'ny tondra-drano be loatra sy hamandoana amin'ny tany izay ampiasaina amin'ny fandalinana ny fizotran'ny hydrôlôjika sy amin'ny fanaraha-maso ny loza.